Sustainability - ZVESE ZVAKAWANDA KUTENGA NOKUDZIDZA CO., LTD
Isu takazvipira kuita bhizinesi rakasimba kuti tipe mabhenefiti anogara kwenguva refu kuvashandi vedu, vatengi, nharaunda yakatenderedza uye nharaunda.
Yedu Yekusimudzira Meter
● Yakaderedza kunwa kwedu kwemvura kwakakura ne19% mugore ra2014-15 kubva pagore remari rapfuura
● Yakaderedza marara edu ane ngozi kumarara ne80% mugore ra2014-15 kubva pagore remari rapfuura
● Nzvimbo yakasimbiswa ye'Zero Liquid discharge 'kubva munzvimbo
● Yakaderedzwa gasi inokachidza gasi nekusangana ne95% yesimba redu rinodikanwa nesimba rakachena rinogadzirwa kubva mumba-medu gasi gasi gasi gasi simba
● Kuwedzera kwenzvimbo dzemvura dzepasi panzvimbo yedu neinoshanda & isingasviki pasi mvura recharge kuburikidza nefekitori-yakafara mvura yekukohwa system
Zvakatipoteredza, Hutano & Kuchengetedza (EHS)
Shanda Nzvimbo Chengetedzo
Maitiro edu eKuchengetedza Chekutanga anotungamirwa nemutemo wedu weEHS, zvinangwa, danho rekuita uye marongero ekuchengetedza manejimendi. Maitiro edu ebasa anoenderana neOHSAS 18001: 2007 manejimendi manejimendi. Isu takaderedza yedu Rekodhi-Chiitiko-Chikero ne 46% mugore ra2014-15 kubva pagore rapfuura remari.
Zviitwa zvekuchengetedza moto zvinotsigirwa kuchengetedza hupenyu uye kudzikisira njodzi yekukuvara uye kukuvara kwepfuma kubva pamoto. Nzvimbo yedu yekugadzira nemidziyo inoongororwa, inochengetwa, inogarwa, uye inoshandiswa mukutevedzera mitemo inoshanda uye nemitemo inogamuchirwa yekuchengetedza moto uye chengetedzo.
Kupa vashandi vedu dziviriro yakanakisa, EPP yakaunza mirau yakasimba pakuchengetedza hutano, kuchengetedzeka pabasa uye kushandiswa kwemidziyo yekuzvidzivirira (PPEs). Isu tinoshandisa mhinduro yakakodzera kuzvirwere zvebasa nekukuvara.
Isu takazvipira kuzadzikisa kugona mukuita nharaunda zvine mutsindo mukugadzira kwedu kwepakeji inoshanduka. EPP ine Environmental Management System (ISO 14001: 2004) iri munzvimbo. Zvinangwa zvedu zveEHS pane zvakakosha zvinokanganisa zvakatipoteredza zvine chekuita nekuburitsa kubva kune yedu saiti, kushandisa zviwanikwa, kuburitsa zvakatipoteredza uye marara kuzadza ivhu. Nzvimbo yekambani inochengetwa mukuteerera zvese zvinoshandiswa nemitemo nemitemo. Yedu yemhando yemhepo index (AQI) nhamba iri mukati meiyo inogutsa bhendi inoshandiswa nemasangano ehurumende. Zvinopfuura zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvepamba pedu zvakafukidzwa nemiti yakasvibira yakasvibira.
EPP Yemagariro, Hutano & Chengetedzo Policy
Takazvipira kuita bhizinesi rekuita tichifunga Nharaunda, Hutano & Chengetedzo sechikamu chakakosha uye mukuita izvi:
● Tichadzivirira kukuvara, hutano husina kunaka uye kusvibiswa kwevashandi vedu nenharaunda nekutora nzira dzekushanda dzakachengeteka.
● Isu tinotevedzera zvinodiwa nemutemo nemitemo zvine chekuita nenjodzi dzeEHS.
● Tichaisa zvinangwa uye zvibodzwa zveEHS zvinotaridzika, tozviongorora nguva nenguva, kuti tigare tichivandudza mashandiro eESH yesangano.
● Tichabatanidza nekudzidzisa vashandi vedu, nevamwewo vane chekuita navo, kuti vabatsirwe nekuvandudzwa kwesangano reEHS.